INaruto (waseJapan: NARUTO ナ ル ト) luluhlu lwe-manga lwamaJapan abhalwe kwaye aboniswa nguMasashi Kishimoto. Ibalisa ibali likaNaruto Uzumaki, i-ninja encinci efuna ukwamkelwa koontanga bakhe kunye namaphupha okuba yiHokage, inkokheli yelali yakhe. Ibali lixelwa kwiindawo ezimbini-iseti yokuqala kwiminyaka yangaphambi kokufikisa, kwaye eyesibini ikwishumi elivisayo. Olu luhlu lusekwe kwimifanekiso emibini kaKishimoto: Karakuri (1995), eyafumana uKishimoto ukuba akhankanywe kwi-Award ye-Hop Step Award kunyaka olandelayo, kunye no-Naruto (1997).
I-Naruto yafakwa kwi-magazine ye-Shueisha, ngeveki Shōnen Jump ukusuka ngo-1999 ukuya ku-2014, kwaye yakhululwa kwifom ye-tankōbon (incwadi) kwimiqulu engama-72. I-manga yahlengahlengiswa kuthotho lwe-TV kamabonwakude eveliswe nguPierrot kunye no-Aniplex, owayesasaza iziqendu ezingama-220 eJapan ukususela ngo-2002 ukuya ku-2007; uhlengahlengiso lwesiNgesi kuthotho olusasazwe kwiCartoon Network kunye neYTV ukusukela ngo2005 ukuya ku2009. UNaruto: Shippuden, elandelelana kuthotho lwantlandlolo, laqala ukuboniswa eJapan ngo-2007, lwaze lwaphela ngo-2017, emva kweziqendu ezingama-500. Ukutshintshwa kwesiNgesi kwasasazwa kwiDisney XD ukusukela ngo-2009 ukuya ku-2011, kusasazwa iziqendu zokuqala ezingama-98, emva koko kwatshintshelwa kwibloko yenkqubo yabantu abadala yokuDada ngoJanuwari ka-2014, ukuqala kwisiqendu sokuqala. Ukuziqhelanisa nesiNgesi kusaqhubeka veki nganye kuNdadi yaBadala ukuza kuthi ga namhlanje. Ngaphandle kothotho lwe-anime, uPierrot uphuhlise iimuvi ezilishumi elinanye kunye neempiliso zoqobo zevidiyo (ezilishumi elinambini). Olunye urhwebo olunxulumene neNaruto lubandakanya iinoveli ezikhanyayo, imidlalo yevidiyo, kunye namakhadi okurhweba aphuhliswe ziinkampani ezininzi. I-Viz Media ilayisenisile kwimanga kunye ne-anime kwimveliso yaseNyakatho Melika kunye ne-serial yeNaruto kwimagazini yabo yedijithali yeVeki yeShonen Jump. Uthotho lwe-anime lwaqala ukusasaza e-United States nase-Canada ngo-2005, nase-United Kingdom nase-Australia ngo-2006 nango-2007 ngokwahlukeneyo. Iifilimu kunye nee-OVAs ezininzi kuthotho zikhutshwe nguViz, kunye neyokuqala umboniso bhanyabhanya kumdlalo bhanyabhanya. I-Viz Media yaqala ukusasaza uthotho lwee-anime kwinkonzo yabo yokusasaza uNeon Alley ngoDisemba ka-2012. Ibali likaNaruto liyaqhubeka nonyana kaNaruto, uBoruto Uzumaki, eBoruto: Naruto Izizukulwana ezilandelayo: UBoruto unqwenela ukwenza eyakhe indlela ye-ninja endaweni yokulandela uyise . UNaruto luthotho lwesine lwama manga athengiswa kakhulu kwimbali, ethengisa iikopi ezizizigidi ezingama-250 kwihlabathi liphela kumazwe angama-46, kunye nezigidi ezili-153 zentengiso eJapan kuphela kwaye ezisele ikopi ezizigidi ezingama-97 kwenye indawo. Iye yaba lolunye uthotho lwama-manga athengiswa kakhulu eViz Media; Iinguqu zabo zesiNgesi zemiqulu ziye zavela kwi-USA Today kunye ne-New York Times uluhlu oluthengisa kakhulu, kwaye umqulu wesixhenxe waphumelela i-Quill Award ngo-2006. Ababuyekezi bancoma ukuphuculwa komlingiswa wama-manga, amabali abukhali, kunye nemidlalo yokulwa eyenziwe kakuhle, nangona Abanye baziva imiboniso yokulwa icothisa ibali. Abagxeki baqaphela ukuba imanga, enomxholo wobudala obudala, isebenzisa izingqinisiso zenkcubeko ezivela kwiintsomi zaseJapan nakwiConfucianism.
Isakhiwo sebali[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]
Icandelo I[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]
Impungutye enamandla eyaziwa ngokuba yiNine-Tails ihlasela iKonoha, ilali yamagqabi efihliweyo kuMhlaba woMlilo (village hidden in the leaves in the Land of Fire), elinye lamazwe amahlanu amakhulu e-shinobi kwilizwe leNinja. Ukuphendula, inkokheli ka-Konoha oyiHokage yesine, u-Minato Namikaze (kunye nenkosikazi yakhe u-Kushina Uzumaki) batywina impungutye ngaphakathi komzimba wonyana wakhe osandul 'ukuzalwa, u-Naruto Uzumaki, esenza ukuba u-Naruto abe ngumkhosi werhamncwa; oku kuthabatha utata ka-Naruto ubomi bakhe, kwaye iHokage yesiThathu ibuya kumhlala-phantsi ukuze iphinde ibe yinkokheli yeKonoha. UNaruto uhlala egculelwa ngabantu baseKonoha ngokuba ngumgcini weNine-Tails. Ngenxa yommiselo owenziwe yi-Hokage yesiThathu ethintela nabani na ukuba akhankanye ezi ziganeko, uNaruto akazi kwanto malunga neNine-Tails de kwayiminyaka eli-12 kamva, xa uMizuki, i-ninja ekreqileyo, etyhila inyani kuNaruto. UNaruto emva koko woyisa uMizuki kumlo, efumana imbeko katitshala wakhe u-Iruka Umino.
Kungekudala emva koko, uNaruto uba yininja kwaye umanyana noSasuke Uchiha, ahlala ekhuphisana naye, kunye noSakura Haruno, lowo atyunyuziweyo naye, ukuba enze iQela lesi-7, phantsi komntu onamava, i-ninja ekumgangatho ophezulu uKakashi Hatake. Njengawo onke amaqela e-ninja avela kwilali nganye, iQela lesi-7 ligqibezela imisebenzi (missions) eliceliwe ngabantu belali, ukusukela ngokwenza imisebenzi kunye nokuba ngoonogada ukwenza ukubulala. Emva kwemisebenzi eliqela, kubandakanya eyona iphambili kwiLizwe lamaza, uKakashi uvumela iQela lesi-7 ukuba lenze uviwo lwe-ninja, elibenza bakwazi ukuqhubela phambili kwinqanaba eliphezulu kwaye bathathe imisebenzi enzima ngakumbi, eyaziwa njenge-Chunin Exams. Ngexesha leemviwo, uOrochimaru, ulwaphulo-mthetho olufunwayo, uhlasela i-Konoha aze abulale i-Hokage yesiThathu ukuziphindezela. UJiraiya, enye yeeninja ezintathu ezaziwayo, uyala isihloko seHokage yesihlanu kwaye yena noNaruto bakhangele uTsunade ukuba abe yiHokage yesihlanu endaweni yoko.
Ngethuba lokukhangela, kutyhilwa ukuba u-Orochimaru unqwenela ukuqeqesha uSasuke ngenxa yelifa lakhe elinamandla, i-Sharingan. Emva kokuzama kukaSasuke ukusilela ukubulala umntakwabo omkhulu u-Itachi xa wayevela eKonoha ukuba athimbe uNaruto, wahlangana noOrochimaru, ngethemba lokufumana kuye amandla afunekayo okubulala u-Itachi. Ibali lithatha indawo xa uSasuke eshiya ilali yaseKonoha kwaye xa uTsunade efumanisa, uthumela iqela le-ninja, kubandakanya uNaruto, ukuba athathe uSasuke, kodwa uNaruto akakwazi ukumcenga okanye amnyanzele ukuba abuye. UNaruto noSakura abayeki kuSasuke: UNaruto ushiya i-Konoha ukuze afumane uqeqesho kuJiraiya ukuze azilungiselele ixesha elizayo xa edibana noSasuke, ngelixa uSakura esiba ngumfundi kaTsunade.
Icandelo II[tshintsha | Yenza izilungiso kokubhaliweyo]
Kwiminyaka emibini enesiqingatha kamva, uNaruto ubuya kuqeqesho kunye noJiraiya. I-Akatsuki iqala ukuthimba imikhosi yezilwanyana ezinamandla ezinomsila (Tailed Beasts). Iqela lesi-7 kunye nelinye le-ninja lilwa nabo kwaye bakhangele iqabane labo uSasuke. I-Akatsuki iyaphumelela ekubambeni nasekukhupheni izilwanyana ezisixhenxe ezinomsila, ebulala yonke imikhosi ngaphandle kukaGaara, ngoku oyi-Kazekage. Ngeli xesha, uSasuke ungcatsha u-Orochimaru kwaye ujongane no-Itachi ukuziphindezela. Emva kokuba u-Itachi efile edabini, uSasuke ufunda kumsunguli we-Akatsuki uTobi ukuba u-Itachi ufumene i-odolo evela kubaphathi baka-Konoha ukuba batshabalalise usapho lwabo ukuthintela ukubhukuqwa. Wayamkela phantsi kwemeko yokuba wayeya kuvunyelwa ukuba asindise uSasuke. Kubuhlungu sesi sityhilelo, uSasuke ujoyine iAkatsuki ukutshabalalisa uKonoha ngokuziphindezela. Njengoko i-Konoha ninjas yoyisa amalungu aliqela e-Akatsuki, inkokheli ye-Akatsuki, u-Nagato, ubulala u-Jiraiya kwaye utshabalalisa u-Konoha, kodwa u-Naruto woyisa kwaye uyamhlangula, efumana imbeko yelali kunye nokunconywa. Ngokufa kukaNagato, uTobi, efihliwe njengoMadara Uchiha (omnye wooyise abasungula uKonoha), uxela ukuba ufuna ukubamba zonke izilo ezilithoba zeTailed ukwenza inkohliso enamandla okulawula lonke uluntu kunye nokufezekisa uxolo lwehlabathi. Iinkokheli zeelali ezintlanu ze-ninja ziyala ukumnceda kwaye endaweni yoko bajoyine imikhosi yokujongana noThobi kunye neqela lakhe. Eso sigqibo sikhokelela kwiMfazwe yeHlabathi yeShinobi phakathi kwemikhosi edityanisiweyo yaMazwe aHlanu aKhulu (aziwa njengeMikhosi eManyeneyo ye-Shinobi) kunye nemikhosi ka-Akatsuki ye-ninjas efana ne-zombie. Amahlanu eKaga azama ukugcina uNaruto, engazi ngemfazwe, kufudo olufihlakeleyo lwesiqithi kufutshane neKumogakure (kwilali efihliweyo yamafu), kodwa uNaruto wafumanisa kwaye wasinda kwisiqithi kunye noKiller Bee, umphathi wee-Eight-Tails. Ngelo xesha, uNaruto-kunye noncedo luka-Killer Bee-ulawula i-Beast Tailed Beast kwaye bobabini baya edabini. Ngexesha lengxabano, kutyhilwa ukuba uTobi ngu-Obito Uchiha, owayesakuba liqela laseKakashi ekwakucingelwa ukuba ubhubhile. UMadara wokwenyani usindise ubomi buka-Obito, kwaye baye basebenzisana. Njengokuba uSasuke efunda ngembali yeKonoha, kubandakanya iimeko ezakhokelela ekuweni kwentsapho yakhe, wagqiba kwelokuba akhusele ilali kwaye ahlangane neNaruto kunye neSakura ukuphazamisa izicwangciso zikaMadara kunye no-Obito. Nangona kunjalo, umzimba kaMadara uphela uphethwe nguKaguya Otsutsuki, inkosazana yakudala enenjongo yokoyisa lonke uluntu. U-Obito ohlaziyiweyo uzincama ngokwakhe ukunceda iQela lesi-7 ukuba limmise. Nje ukuba uKaguya atywinwe, uMadara naye uyafa. I-Sasuke isebenzisa eli thuba kwaye ithathe ulawulo lwazo zonke izilwanyana ezinomsila, njengoko ityhila injongo yayo yokuphelisa inkqubo yangoku yelali. UNaruto ujongene noSasuke ukuze amnqande kwisicwangciso sakhe, kwaye emva kokuba baphantse babulalana kwidabi lokugqibela, uSasuke uyavuma ukoyiswa kunye nohlaziyo. Emva kwemfazwe, Kakashi waba yesithandathu Hokage kunye noxolo Sasuke ngenxa yolwaphulo-mthetho. Kwiminyaka kamva, uKakashi uyehla ngelixa uNaruto etshata noHinata Hyuga kwaye esiba yiSeokth Hokage, ephakamisa isizukulwana esilandelayo.
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-26 EyoMqungu 2021, kwi-18:07